Nyaya Yemusango: Wild 2D Yekutanga Munhu Yekutamba | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe 2D uye wekutanga munhu angaite senge asinganzwisisike, chokwadi ndechekuti ichi chiitiko chekutsvaga zvinhu zvakavanzika, nongedzera nekombora wobva wadzvanya. Ndozvazvinounza Nyaya Yemusango, zita rakagadzirwa neboka diki rakazvimiririra kubva kuUkraine rinonzi Specialbit Studio. Iyo imwecheteyo studio yakagadzira Angelo uye Deemon: Imwe Hell yeQuest.
Iyo Wild Case inotarisana nezviitiko zve mutikitivha akaenzana uyo anofamba achienda kumusha uri kure wakadzika musango, uko kunoitika zvinhu zvisinganzwisisike, uye zvisikwa zvine maziso anopenya zvinotyisa vagari. Zvinonzwika kunge zvinokatyamadza, uye zvine basa rakakura rehunyanzvi pairi. Zvese izvo pamwe zvinogadzira chinonakidza chinwiwa chevatambi vanofarira mitambo yemavhidhiyo yemaitiro aya ...
Kana ari features kubva kuWild Case, inosanganisira:
Kufambidzana neiyo chaiyo uye idiosyncratic NPCs.
Mamiriro ekunze ekudenga munzvimbo dziri kure dzesaiti kunoitika nyaya.
Puzzle dzinonakidza dzinosanganisira kuongorora uye kusangana kweNPC.
Masango uko kwaunowana wekugara uye muroyi. Ndiani achabatana newe uye ndiani achava muvengi wako? Iwe unofanirwa kuzviwana ...
Vhura nyika yakagadzirira kuongororwa pamadiro, izvo zvinopa zita iri rusununguko rwakawanda.
Kusangana nezvinhu zvisina kujairika nezvakavanzika zvinozokuvhundutsa uye kukukanganisa kusvika kumagumo kwenyaya.
Kana iwe uchifarira izvo iwe waverenga, iwe unofanirwa kuziva kuti inowanikwa pa chitoro cheValve. Saka, unogona kumira chiutsi kuzviwana izvozvi. Uye zvakare, iwe unayo yaunowana yemahara muedzo, iyo Demo yemutambo kuitira kuti iwe ugone kuzviedza pasina kubhadhara chero chinhu, uye kana uchichifarira, tenga iyo yakazara vhezheni. Mutengo weshanduro iyi € 7.99, kunyangwe kana iwe uine rombo rakaringana rekubata Steam kusimudzira, zvinogona kunge zvakachipa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Nyaya Yemusango: Wild 2D Yekutanga Munhu Yekushanya
Kuno kuArgentina isu tiri varombo zvekuti steam inotinzwira tsitsi uye inopa zita iri kuma130 pesos, ingave 1.17 euros XD